Wasiirkii Patroolka dalka Libya oo ka goostay maamulka madaxweyne Qadaafi – SBC
Wasiirkii Patroolka dalka Libya oo ka goostay maamulka madaxweyne Qadaafi
Tunis:-Ilo wareed ku sugan dalka Tunisia ayaa sheegaya in Shukri Qaanim oo ah waiirka Patroolka Libya uu ka baxay maamulka madaxweyne Qadaafi kadib markii uu ka gudbay xadka u dhexeeya Tunisia iyo Libya.
Ilo wareedka ayaa intaas ku daraya in iyo shakhsiyaad kale oo mas’uuliyiin Libyan ah ay ku sugnaayeen maalmahan dambe Jasiirada Jarba ee dalka Tunisia kadibna ay u ambabaxeen maalintii shaley xarunta dalka Tunisia.
Mr Qaanim ayaa madax ka ahaa golaha maamulka hay’adda qaranka ee shidaalka Libya.
Wasiirka ayaa waxaa socdaalkiisa qarsoodiga ah ku wehliya xoghayaha arrimaha iskaashiga dibadda iyo agaasimaha kastamada Libya iyo madaxa xiriirka dibadda ee arrimaha Africa iyo Carabta.
Dadka u kuurgala siyaasadda Libya ayaa sheegay in tani ay dhabarjab weyn ku tahay maamulka madaxweyne Qadaafi xilli ay sii kordheyso duqeynta diyaaradaha dagaalka NATO ee xarunta dalka Libya iyo saldhigyada ciidanka dowladda.
Mr Qaanim ayaa ah mas’uulkii labaad ee qaada talaabadan kadib wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dalka Libya Muusa Kuusa uu u baxsaday dalka Britain.
Sidoo kale Maxed Mucammar Al-qadaafi oo ah wiilka ugu weyn colonel Qadaafi ayaa kusugan Jasiiradda Jarba ee dalka Tunisia, halkaasi oo lagu daweenayo isgoo ay la socdaan mas’uuliyiin mukhaabaraatka Libya ah.
Dhanka kale Cali Al-tarhuuni oo ah mas’uulka Naftada iyo lacagta mucaaradka Libya ayaa sheegay in uu filayo in dalkiisa uu u matali doono kulanka ururka dalalka ku bahoobay dhoofinta shidaalka marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan OPEC bisha June ee soo socota.